Maimaim-poana Niaraka tamin'ny olona tany Brezila Niaraka
ry zazavavy-ny vehivavy iray aho mitady olona ho an’ny fianakaviana ny fitiavana tsy misy vonona ny hizara ahy rehetra amin’ny fomba tsy miangatra ary noho izany dia mila fiaraha-miombom-po fiaraha-mientana ifampizarana fahatakarana ny fitsitsiana ny fahamarinan-toetra mafana ny toe-pihetseham-pontsika ary mazava ho azy fa ny fitiavantsika izy ireo-nefa tsy izany no fomba-ka na dia vonona ny hifindra any amin’ny firenena na eo an zom-pirenena, ny volon-koditra sy ny fivavahana tsy maintsy misy ny soatoavina Mahafinaritra, manifinify ny vehivavy, ny ara-dalàna, maimaim-poana.
Tsy handefitra ny kolikoly, meanness sy ny fitaka.
Ny olona toy izany dia tsy mila ahy
Tena te-hihaona aminao izao (na eny an-dalana tampoka), faly mandany fotoana miaraka amin’ny fahafinaretana, ny tsy nampoizina, mba hanangana ny ny toe-po dia liana amin’ny ho avy ihany, amin’ny fifandraisana matotra. Tiako ny fomba fiaina mavitrika, ny ankizy sy ny asa samy hafa mifandray aminy. Ao amin’ny vanin-taona mafana, ny natiora sy ny dia lavitra. Amin’ny ririnina, downhill tia manao ski ambony, mendrika, ny teatra, ny rindran-kira.
Hafa amin’ny mahazatra
Tongasoa eto amin’ny pejy ny aterineto ny fihaonana amin’ireo olona any Brezila. Eto dia afaka maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana mijery ny mombamomba ny olona manerana ny firenena. Fa rehefa voasoratra anarana ianao dia mahazo ny fidirana amin’ny chat miaraka amin’ny lehilahy sy ankizilahy, fa tsy ny afa-tsy ao Brezila, fa koa any amin’ny firenena hafa izao tontolo izao. Raha te-hihaona, hahita ny fitiavana, ho vaovao ny olom-pantatra sy ny namana, ny antsasany, ny Mampiaraka toerana no miandry anao
← Iraisam-Pirenena Mampiaraka Brezila, Pelaka Mampiaraka Brezila, Ny Fiarahana Amin'ny Chat Brezila
Ny Fitsangantsanganana Tany Brasilia. Ny fiarahana amin'ny tranonkala Brasilia ho maimaim-poana, tsy misy fisoratana anarana ho amin'ny fifandraisana matotra →